Guddomiye Mursi Iyo Guddomiyaha Barlamaanka Jabuuti Oo Ku Wajahan Magalada Baydhabo -
[ February 23, 2020 ] Madaxweyne Axmed Madoobe oo Dhoobley ka wada kulamo ka dhan ah Dowlada Farmaajo	Wararka
[ February 23, 2020 ] Talyaaniga Oo Go’aan Culus Kasoo Saaray Cudurka Coronavirus	Wararka
[ February 23, 2020 ] Dadka Degaanka Ceel cali iyo Al Shabaab Oo Dagaal Dhex maray	Wararka
[ February 23, 2020 ] Itoobiya oo war ka soo saartay raali-gelintii Farmaajo ee Somaliland	Wararka
[ February 22, 2020 ] Farmaajo Oo Ku Mashquulsan Joojinta Shirka Beesha Muddulood ee Muqdisho	Wararka
HomeWararkaGuddomiye Mursi Iyo Guddomiyaha Barlamaanka Jabuuti Oo Ku Wajahan Magalada Baydhabo
Guddomiye Mursi Iyo Guddomiyaha Barlamaanka Jabuuti Oo Ku Wajahan Magalada Baydhabo
October 7, 2019 F.G Wararka 0
Wafdi ay hoggaaminayaan Guddoomiyeyaasha Baarlamaanada Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa maanta ku wajahan magaalada Baydhabo ee caasimadda KMG ah ee Maamulka Koofur Galbeed, halkaasoo ay wadajir uga qeyb galayaan furitaanka kulanka Baarlamaanka dowlad goboleedka Koofur Galbeed.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumad iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhow soo gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo kaddib u sii gudbi doona magaalada Baydhabo.
Booqashada Wafdiga uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti ayaa qaadan doonta dhowr maalmood, isagoo ka qeyb geli doona Kalfadhiyada Baarlamaanada Federaalka Soomaaliya iyo kan Koofur Galbeed oo todobaadkan furmaya.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo haatan ku sugan Garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa soo dhoweeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti, waxaana la filayaa inay wadajir ugu ambabaxaan Baydhabo.
Guddoomiye Mursal ayaa waxaa safarkiisa Baydhabo ku wehliya Xildhibaano ka tirsan labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka iyo Wasiiro.
Ammaanka magaalada Baydhabo ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoo shalay magaaladaas uu gaaray wafdi uu hoggaaminayay Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed C/casiis Lafta Gareen oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Muqdisho.